Waa kuwee caasimadaha dhismooyinkooda ebar laga soo bilaabay? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaWaa kuwee caasimadaha dhismooyinkooda ebar laga soo bilaabay?
Madaxweynaha Indonesia ayaa waxa uu si rasmi ah baaralamaanka dalkaasi ugu gudbiyay qorshe uu caasimadda dalkaasi uga wareejinayo magaalada Jakarta ee ku taal jasiiradda Java, taas oo la gayn doono deegaan aanan la cayimin oo ka tirsan Kalimantan.
“2021-ka waxaannu filaynaa inaannu dhagaxa dhigi doonno caasimad cusub iyadoo 2024-kana aannu filayno inaannu bilaabi doonno wajiga koobaad ee caasimadda cusub loogu soo guuraayo,” Wasiirka qorsheynta ee Indonesia ayaa sidaasi sheegay bishii la soo dhaafay.
Kalimantan ayaa waxaa si weyn loogu yaqaan inay ka mid tahay goobaha caalamka gabaabsiga ku ah ee kaymaha dihan ee dabiiciga ah. Hasayeeshee waxa ay warbaahinta qabsatay 2015-kii markaas oo uu qabsaday dab baaxad weyn oo saameeyay dalalka dariska ah ee Singapore, Malaysia, iyo Thailand.
Balse in “caasimad laga sameeyo meel ebar ah” ayaa Indonesia waxa ay qaadaysaa waddadii ay horay dalal kale u qaadeen, tusaalooyinkana waxaa ka mid ah.
Caasimadda cusub ayaa waxaa lagu dhisay magaalada qadiimiga ah ee Delhi, taas oo caasimad u aheyd Boqortooyadii Mughal laga soo bilaabo 1648 ilaa 1857
Nuxurka Qodobbadii Ay Ka Wada Hadleen Donald Trump iyo Boris Johnson Oo Kulan Ku Yeeshay Paris